Isifo senhliziyo kuyinto isishayo yangempela kwekhulu lama-21. Cishe wonke umuntu wesibili uhlushwa lesi sifo. Abanye bangase ilapha lezo zifo ngemithi yokwelapha, kodwa lokho ukuhlinzwa abanye kubalulekile. Omunye imisebenzi eyisisekelo, ukunciphisa ukugeleza kwegazi izitsha enhliziyweni, dlula yenhliziyo.
Leli gama laqala ukusetshenziswa imithombo eminingi yezokwelapha isikhathi eside impela. Okwamanje, lo msebenzi cishe kuphela into efana nayo. Ngokwezibalo, emhlabeni wonke wachitha izinqubo abangaba yisigidi ezifana ngonyaka.
Njengoba kushiwo, iningi iziguli nokuhlinzwa yenhliziyo Umthambo isifo yenhliziyo Umthambo dlula kuyadingeka. Kuyini - azi, ngeshwa, hhayi eminingi.
Coronary ukuhlinzwa Umthambo dlula kuhilela ukunqunywa izindlela ezitsheni inhliziyo.
Ukusebenza ngempela okukhulu ezinzima.
Ngokwezibalo, lo msebenzi wenziwa amaphesenti angu-12 kuphela kuzo zonke abantu abadinga usizo. Kwezinye kukhona contraindications nokwenza kwayo, kuyilapho abanye musa njalo ufune usizo lwabezokwelapha.
Uma ukusebenza ubonakele, ososayensi abaningi ovelele baye babonisa isithakazelo esikhulu kulo, Nokho, ngemva kweminyaka emibili indalo yayo, ukusebenza yavinjelwa. Phinda yethulwa ngesikhathi esingaphansi nje eminyakeni embalwa, lapho ukusebenza kwaqala ukuvela kwabezindaba emhlabeni. Kusukela ngaleso sikhathi, ukusetshenziswa salo sesibe cishe nsuku zonke, futhi odokotela abaningi musa ukumela kungenzeka ikhambi ukuxhumelela imithambo yenhliziyo isifo, kodwa ukuqhuba lo msebenzi.
I pathogenesis ka yenhliziyo Umthambo isifo
Yenhliziyo Umthambo isifo eba lapho nemithambo yegazi yenhliziyo sebeqala ukuzwa ukuntula umoya-mpilo. Lokhu kwenzeka ngenxa omncane mafutha anciphisa isikhala esingaphakathi. Izizathu okuholela ukuvaleka, abaningi - ezisukela kwasekuzalweni futhi ukuvaleka normal kusukela ekuzalweni ziphethe ukwehla mafutha anciphisa isikhala esingaphakathi ngenxa ekwandeni zingcwecwe atherosclerotic.
Ngokuvamile, IBS izimpawu musa ubonise ngokwabo kuze kube yilesi sikhathi, kuze inesikhala akuyona ayisesemikhulu ngamaphesenti angaphezu kuka-70. Umtholampilo ingavela kuphela uma kuba nomsebenzi abalulekile ngokomzimba.
Izici eziyinhloko ukuthuthukiswa isifo senhliziyo kuyinto ubuhlungu besifuba ephelezelwa iphika kanye babenakho ukwesaba. Nge ukuvaleka okukhulu izitsha yenhliziyo kwandisa ingozi yesifo senhliziyo.
Lapho ukwelashwa ngoludala kuyinto ayizwakali (reception vasodilator izidakamizwa) eyenziwa yenhliziyo Umthambo dlula ngokuxhunyelelwa.
Ukusebenza wenziwa okukhulu kwenhliziyo ukuhlinzwa, t. E. Kuyadingeka ukuvula esifubeni. I imbobo Ivame ukwenziwa eduze cartilages costal ngakwesokunxele.
Isiguli ngesikhathi kokungenela uxhumeke umshini heart-lung.
Ukusebenza wenziwa ngaphansi izinzwa jikelele.
Ukwakha shunt isetshenziswa ngokuvamile izitsha olukha phezulu (ongama Vienna imilenze noma Umthambo mammary yangaphakathi). I shunt okuholela, ake wasusa, sisetshenziswa nangaphezulu ukuvaleka kwemithambo yenhliziyo kanye sutured ku isitsha. Lokhu kusiza enomopho ngokusebenzisa Umthambo ethintekile futhi likuvumela ukususa ischemia esivimba amanzi.
Kwezinye izimo iphendukele kabusha umfula osabalalayo njengoba ukugeleza kwegazi ngokusebenzisa imithambo kuyinto maqembu ngcono kakhulu.
Okwamanje, ithambekele kakhudlwana ukuqhuba imisebenzi ngaphandle kokusebenzisa dlula cardiopulmonary, njengoba kudlula igazi ngokusebenzisa lolu phiko kunomthelela obomvu ukulimala kwamangqamuzana igazi hemolysis.
dlula izitsha coronary wenhliziyo okuboniswe kulezi zimo ezilandelayo:
Encishisiwe igazi patency kwesokunxele ukuxhumelela imithambo yenhliziyo ngamaphesenti okungenani 50. Lokhu isitsha kuyinto infarction ezinkulu kokudla. Iningi igazi umbuzo ngaye, ngoba lokho block ezingeni isitsha igcwele ischemia ezinzima futhi isilethikusebenza.
Ukwehla inesikhala izitsha yenhliziyo amaphesenti angu-70.
Ukuba khona stenosis we anterior Umthambo interventricular (ikakhulukazi endaweni bifurcation).
Lezi ukufundwa kukhona eziyisisekelo yenhliziyo ukuhlinzwa dlula.
Ngaphandle kwabo kukhona onqabayo, izinkomba lingaze. Basuke kubangelwa neziqubu kaningi angina (ubuhlungu, umuzwa constriction esifubeni), futhi ngokuvamile ukunqampunwa imithi. Nokho, inkinga iba sina ngaphezulu esimweni lapho imithi uphelelwa amandla, kanye nokuhlasela ayabaluleka njalo. Ukuthi kuleli cala kumele kakade waphakamisa impikiswano shunting.
Ngenxa ukusabalala ulwazi olubanzi oluhlukahlukene ubuchwepheshe, ufunde mayelana ukuxhumelela imithambo yenhliziyo ukuhlinzwa dlula - kuyini, ukuthi ubufakazi bakhe - akunzima. Konke kuyinkimbinkimbi nakakhulu nge Izimo.
Ngokungafani izinkomba ukuhlinzwa, zonke Izimo kukhona isihlobo, njengoba umbuzo esigulini ngasinye mayelana ukusebenza kufanele kubhekwe zivela idatha yayo eqondile.
Kukholakala ukuthi iminyaka lesiguli, iminyaka ikakhulukazi phezu 70, iyisici ezimba ukuqhuba ukungenelela. Okwamanje, iziguli eziningi bagugile ukubekezelela kuphazamisa inhliziyo (kuba ngenxa ukungabi khona izifo concomitant ezingamahlalakhona ezithinta hemodynamics). Kulabo abane izifo ezifana, odokotela bathambekela ngokwengeziwe ukufakelwa inhliziyo futhi semithambo (ngaphandle uthi kukhona decompensated).
Ngaphambili, i-coronary dlula ukuhlinzwa izitsha inhliziyo lwalwenziwa ukwehluleka kwezinso noma inqubo esebenzayo oncological. Manje ungathola ulwazi ukungenelela olwenziwa kuhle ngempumelelo kulezi iziguli ezine umphumela omuhle kanye prolongation zokuphila iminyaka engaphezu kwengu-10.
Njengoba lo msebenzi ngempela okukhulu ezinzima, okukhulu ukuphathwa efanele leziguli othola yenhliziyo Umthambo dlula ngokuxhunyelelwa. Ngemva kokuhlinzwa ngokuvamile ukuthuthukisa yezinkinga ezifana nokulahlekelwa wamaphaphu komoya (ngenxa kokuhlala isikhathi eside isiguli emshinini womoya-mpilo) kanye nezinkinga ezithathelwanayo.
Prophylaxis kuphazamiseka zokuphefumula kusetshenziswa ibhaluni izinga lokwehla kwamandla emali noma amathoyizi ekhethekile. Vimbela ukuthuthukiswa yezinkinga ezithathelwanayo nzima - ngaso sonke isikhathi ushintsho ngokucophelela futhi ngesikhathi esifanele amabhandeshi ukusiza ukuvimbela ukutheleleka.
Qiniseka ukuqapha kwemigomo umthamo wegazi lesiguli, njengoba ngenxa massiveness yokusebenza zingaqhubekela waphawula abalulekile ukopha. Kulokhu, isiguli umane kudingeka ukumpontshelwa igazi ukuze sivale lapho sisilela amaphutha ayo.
Zonke iziguli ukuthi lo msebenzi wenziwa - yenhliziyo ukuhlinzwa dlula - abe isikhathi eside ukudlula nokuvuselelwa futhi ugweme ukucindezeleka. Lokhu kwenziwa ukuze kuvinjelwe ukungafani metal ukudla okubekelwe sternum.
Imibono iziguli mayelana nokusebenza
Ziyanda iziguli kokungenela ezitsheni inhliziyo. Uma ulihlola amasayithi ahlukahlukene kanye nezithangami enikelwe le nkinga, ubonakala ukuthi abantu abaningi abaye zabhekana yenhliziyo ukuhlinzwa dlula, ukubuyekezwa sasivumela omuhle. Ngcono kakhulu izinga lokuphila, futhi iziguli eziningi ungabuyela umsebenzi evamile (kuphela ngemva kwenkathi nokuvuselelwa). It kunciphisa inani ukuhlaselwa angina, okuyinto kakhulu kuthinta imisebenzi zokuphila kwansuku zonke.
Abaningi bayazibuza - kangakanani lo msebenzi?
Konke kuncike kulokho isimo lesiguli zempilo ngesikhathi ukuzimisela izinkomba ukuhlinzwa. Uma ubonisa yenhliziyo ukuhlinzwa Umthambo dlula, intengo izokuba nezinto ezifana ngevolumu kokungenela, ziqu of udokotela ohlinzayo yokusebenza, kodwa cishe bonke imisebenzi enjalo eyenziwa mahhala. Imali ukuqaliswa yabo abelwe by isabelomali wombuso (ezibhedlela ezizimele izindleko ukuhlinzwa zokhahlamba kusuka 7 kuya kwezingu-10 zamaRandi, okuyinto ngempela eqolo).
Ingabe kuzuzisa ukwenza lo msebenzi?
Ezigulini eziningi angina eside, yenhliziyo ukuhlinzwa Umthambo dlula kuboniswa. Kuyini - ambalwa abantu bazi, ngoba lokho ngempela kumelwe kube uthole incazelo eningiliziwe yokuthi udokotela. Ezinye singesabi futhi senqabe ukusebenza, njengoba kunemidanti kubenzima futhi kunzima, futhi ingozi yezinkinga kuphezulu kakhulu. Abanye sizifake engozini ngamabomu, azi ukuthi ngaphandle kokusebenzisa zonke Kungenzeka zimbi kakhulu.
Kufanele ngenzeni ukusebenza - ukukhetha kwenzelwe nje ngabanye. Nokho, uma ukusebenza kuboniswa, kungcono ukuba afeze, kusukela umphumela omuhle (lethality ngesikhathi msebenzi esingaphansi ngamaphesenti angu-2) kakhulu ngcono isimo kanye nezinga lempilo.
Ushukela ephansi igazi - ecabanga zonke sikashukela
Kanjani ukuze uhlole amagciwane iPhone: izindlela nezinhlelo